OpenSuse Fekitori: Chii chekuita mushure mekuiisa? | Kubva kuLinux
OpenSuse Fekitori: Chii chekuita mushure mekuiisa?
peterczech | | Kugoverwa, GNU / Linux
Sekuziva kwevazhinji kuti ndinoshandisa vhura, uye ini ndakazvishandisa muPC dzangu dzese uye maseva ... Pamaseva ndinochengeta yakawedzera rutsigiro vhezheni (miti yakasvibira), nhasi iri vhezheni 13.1.
Kana ari maPC, kusvika nguva pfupi yadarika ini ndakashandisawo vhezheni 13.1, asi isu tave nemazuva gumi nematanhatu kubva pakatangwa vhezheni 19 uye ndakazvibvunza mubvunzo ... Ini ndinoshandura kuita vhezheni 13.2 kana ini ndinoshandura kuOpenSUSE Fekitori vhezheni sezvo iri Rolling Kuburitswa uye handifanire kuisazve?
1 Chii chinonzi openSUSE Factory?
2 Ndinoitora kupi kubva?
Chii chinonzi openSUSE Factory?
Iyo OpenSUSE Fakisheni yekuparadzira ndeyekupararira kugovera uye hwaro hweinotevera inotevera kugadzikana kuburitswa kweUSUSUSE.
Iko kunogara kurukova rwe mapaketi achipinda mu OpenSUSE Fekitori. Iko hakuna mafiriza uye mapakeji ehurongwa anoedzwa uchishandisa openQA. Kana iyo otomatiki bvunzo yapera uye iyo repository iri mune yakagadzikana mamiriro, iyo repository inoongororwa neakavhurikaSUSE timu uye yakawiriraniswa nemirazi ekurodha pasi. Izvi zvinoitika kamwe kana kaviri pavhiki.
Mushure mekuongorora uye kutsvaga nesimba, ndafunga kusvetukira kuFekitori vhezheni, ehe, ndichiita yakachena kuisirwa ...
Heano mamwe mifananidzo yeFekitori rangu neGnome-goko:
Ini ndinokurudzira kurodha pasi iyo fekitori vhezheni DVD:
su (isu tinosuma superuser password) zypper kugadzirisa zypper kuisa-nyowani-inokurudzira
zypper ar -f -n packman-zvakakosha http://packman.inode.at/suse/Factory/Essentials/ packman-inokosha
Gnome repository (mune nyaya yekushandisa Gnome… inokurudzirwa):
KDE repository (mune nyaya yekushandisa KDE… sarudzo):
zypper kugadzirisa zypper kuisa-nyowani-inokurudzira zypper dist-kusimudzira
zypper gadza vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird
zypper kugadzirisa zypper kuisa-nyowani-inokurudzira
zypper gadza --type pateni devel_basis
Uye voila… Iwe unotova neyakavhurika yako SUSE Fekitori yakagadzirira uye kubhurawuza iyo Roling Regedzera aquas.
PS Iyo theme yandinoshandisa yegobvu ndeye Numix Frost uye mifananidzo iri Numix Denderedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » OpenSuse Fekitori: Chii chekuita mushure mekuiisa?
Ini ndinofunga ndichaiisa pamakumbo angu.
Ini ndinofunga kuvhura kusingabviri pakati peinternet, acpi negonzo risingawanikwe. Zvakanyanya kunaka panguva yandakanga ndiri
Akasarudza sarudzo yakanakisa yekusarudza Fekitori, asingakanganise kuti iwo ma OpenSUSE mavhezheni emhando yepamusoro senge 13.1
Mhoro, uye nei kuda kwakawanda kweOpenSuse? ndezvipi zvakanaka zvaunoona? Nenzira, ndeipi vhezheni yeGnome inogona kuiswa.
Rudo rwacho rwakakonzerwa nenyaya yekuti kuseri kwekugovera uku kune nharaunda inoitira hanya mazuva ese kuburitsa chigadzirwa chemhando yepamusoro senge OpenSUSE, kuchiisa munzvimbo dzekutanga. Yakawanda sei Gnome iwe yaunogona kuwana yazvino vhezheni mune inotevera vhezheni 13.2 uye muFekitori.
Mhoro, tarisa zvakanakira kuvhuraSUSE pane zvakawanda ... Pakati pezvakanyanya kugadzikana, zvinyorwa, software kugadzirisa kana yast pakati pevamwe ...
Handina kuyedza OpenSuse kwenguva yakareba ... ndanga ndichida kuiisa, ndatenda nekundiyedza kushandisa OpenSuse Fekitori:]
Ehe, ndiri kukuona uchinyatsoda iyi vhezheni, yoyo inoifarira futi. Zvakaipa kuti kwandiri hazvibvumire kuti ndiise zvakanaka, nekuda kwekadhi revhidhiyo reAti. Parizvino hapana vatyairi vakadzikama vevanobata, uye kushandisa vakasununguka, hazvindibvumidze kana ini handina kuzviwedzera nemazvo, nekuti hazvipfuure iyo gdm.
zvino ndoupi wevaviri ava mari.
 vhuraSUSE-Fekitori-DVD-x86_64-Yazvino.iso 12-Oct-2014 18:24 4.3G
 kuvhuraSUSE-Fekitori-DVD-x86_64-Snapshot20141011-Media.iso 12-Oct-2014 18:24 4.3G
Ini ndinotora iyo Current.iso.
Zvinonakidza, ndanga ndichifunga kuti vaizotsaurira riini kutumira kune chidiki chegecko. Ndakaiyedza kwevhiki uye zvakanaka. Ukandiudza maitiro ekuisa HP multifunction, ndinoisiya palaptop yangu laptop
Nenzira, iwe unofanirwa kutaura zvishoma nezve mashandiro ayo zvirinani kwandiri, anga akanaka kwazvo.
Kutenda nekutumira, ndainakidza chaizvo.
Zvakanaka kuwedzera purinda yako unogona kuenda kuYast -> Maprinta uye wobva wawedzera kana kuisa hp driver inonzi hplib nemirairo:
zypper kuisa hplib
Ini handisati ndamboshandisa Suse, pamwe imwe nguva ndinoirodha asi ndakaisa Mandrake iyo yandisina kufarira .. Ndakaisa yekutanga live CD .. Knoppix .. yangu yekupedzisira nhanho yekungosiya linux pakombuta yaive Ubuntu .. Kubva ipapo vakaona madistros akaita saSabayon andakashandisa kwemakore ndakadzokera kuUbuntu asi ini ndanga ndisingauwane uchitonhorera .. uye unit payakasvika zvakangoita kuti ndive nekusingaperi kusarudza pane imwe distro uye ini ndakawana ArchLinux iyo yaigara ichichiva zvidzitiro zvavo .. sei Ini ndaifanira kuiisa pane imwe komputa ini yandakashandisa Manjaro .. nekuti yaive yatogadzirwa .. asi zvakandibata kunyangwe ndichiziva kuti ndizvo zviri Ubuntu kunaDebian .. Manjaro kuna ArchLinux .. Yese murairidzo iyi yaive yekureva kuti inoenderera mhedzisiro ndiyo yakanyanya uye inofanirwa kunge iri ramangwana reLinux ... kuti OpenSuse neRed Hat ndiwo makambani anotungamira muLinux uye kuti OpenSuse iri kutora danho iri inondikurudzira zvakanyanya kuti ndiedze uye kuti ndinotenda iyi posvo kuita kuti nhanho iyi ive nyore ..
Pindura kuna abrahamtamayo
Zvakanaka, kuyedza zvakanzi: D.
Ndinokutendai Peercheco nemutungamiri wenyu uye nekuti inongedzo.
Ini ndinoshandisa SUSE mune yayo yazvino vhezheni asi muKde uye uri kutaura chokwadi kana iwe uchiti iyo yakagadzikana distro. Uye zvakare ine timu yeanotanga-mwero nyanzvi, iyo inoshandura mune yekutanga-mwero kugovera. Iwe unoti: »Ini ndinoshandura here kushandura 13.2 kana ini ndinoshandura kune OpenSUSE Fekitori vhezheni sezvo iri Rolling Kuburitswa uye handifanire kudzoreredza?. Zvakanaka, muchidimbu ndinofunga kuti hazvina basa nekuti kana ukasaisa izvozvi uchafanirwa kuisa gare gare. Kune yangu chikamu ini ndinofunga ndichaisa gare gare kuitira kuti buggi inomuka uye nguva yekuigadzirisa, kunyangwe isingaite zvakanyanya.
Zvinosuruvarisa kusiya kugoverwa kwe13.1, uko kwakapa mibairo yakadai uye kunoramba kuchipa, uye muchidimbu, pese panenge paine shanduko yekugovera, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri uye kuri kuzvidemba kusiya chinhu izvo zviri kufamba zvakanaka nekuti hatizive kuti zvichave sei .kuuya.
Zvakanaka, kana iwe uchitsvaga yakanyanya kugadzikana uye wakasuruvara kuchinja 13.1 kusvika 13.2 kana Fekitori, ramba uchishandisa 13.1 sezvo iri vhezheni ine yakawedzera Yegreen rutsigiro ... More info:
Kusvika panosvika Mbudzi 2016 pane nguva :). Ndinoita zvimwe chete kuseva.
Mushure mekumisikidza Gentoo, Ubuntu, Debian uye Arch, izvo zvandiri kuda kuchengeta ndeye OpenSUSE, chokwadi ndechekuti ini ndinoshandisa 13.1 uye ine kugadzikana kwakaenzana neiyo Debian yakagadzika asi iine akawanda ano mapakeji. Ndinozvikurudzira zvese kushandiswa kwezuva nezuva, kunyanya mumaLaptops uye nenzvimbo dzekugadzira, iyi distro inopa kunzwa kwekugadzikana uye kukomba kwandisina kuona kune vamwe.
Chokwadi, ndeimwe yeakanakisa kunze uko uye ndinofunga yakatogadzikana kupfuura Debian Stable pachayo. Midzi yeSlackware iri kuratidza.
Ini ndinoshandisa Debian Kwayedza KDE uye yakanyatsogadzikana, hapana chakundikana ini uye inomhanya chaizvo. Suse inotsamwisa zvikuru nezvakachengetedzwa, iwe unofanirwa kuwedzera zvakawanda kwazviri, ini ndinoshandisa openuse pane yangu bhuku rebhuku uye zvakare iri yakanaka distro. Asi Debian itangi uye hapana anoenderana nezvitsitsinho zvayo
Nemusiyano uyo Slack unotyora nechero gadziriso, OpenSUSE ine pusa isina kugadzikana.
Ndanga ndichishandisa Fekitori kubva panguva yakava RR, uye ruzivo rwangu harugone kuve rwakanaka. Ini ndakaiisa padesktop (Asus board, kwete UEFI sezvo iine makore mashoma), pamwe naFedora naWin7, uye zvese zvakakwana.
Ini ndakaiisawo mazuva mashoma apfuura pane diki Netbook yandinayo (Acer TravelMate B113-E), iyo ine EFI bios, uye ndinayo pamwe chete naFedora 21 (alpha, asi iri zvakare yakasarudzika). Matambudziko eZero, uye nekutsanya senge iye ega.
Mune yekupedzisira, kuti ndidzivise matambudziko ese eEFI, ini ndakaisa openSUSE uyezve ini ndakaisa Fedora (ini ndakakamura diski muGPT kwechinguva chemazuva ano), ipapo, neEFI yakagoneswa, pamberi pebhutsu chete, ndakadzvanya F12, kuti nditore bhuti menyu kunze kweiyo bios (kana ini ndisina kuzviita saizvozvo, Fedora chete ndiye akaonekwa muGrub), ini ndakasarudza kutanga ne openSUSE uye, kamwe mukati, neYast ndakaenda kubhuti boot chikamu, ndakasimbisa kuti ndichiri nacho muGrub2-EFI uye kuti ndakanga ndagonesa kuongorora mamwe masisitimu anoshanda…. uye pandakavhara ... voila !!, ini ndakaisa iyo yakavhurikaSUSE Grub2 zvakare, asi ikozvino inosanganisa iyo Fedora sarudzo, saka ndinogona kutanga iyo system yandinoda pasina kuita kune "asingazivikanwe makiyi".
Handizive kana iri zano kana riri rechokwadi, asi kusanganiswa kwe 'btrfs' pamudzi, uye XFS ye '/ imba' inoita kuti iende nekukurumidza chaizvo.
Sezvandinotaura, kuvhuraSUSE Fekitori ndiyo yangu huru system izvozvi ...
… Uye kuwedzera PackMan yeFekitori (ndinotenda YoYo nezvepositi kwandakaiona)… Handina kana chandakarasikirwa…
Printer yeWi-Fi yandinayo iri kundipa kumborwadziwa nemusoro, asi mabhureki anoenda kuburikidza neiyo firewall (muFedora ndinoiwana uye ndinoigadzirisa nekukurumidza, yakavhurikaSUSE ndiri kutora nguva refu kuburikidza neiyo firewall ...)
Kubva pane yangu pfupi ruzivo, ini ndinofunga Fekitori yakagadzikana zvakakwana kuti uzvisarudzire, panzvimbo pe13.2
kuvhuraSUSE yaive yangu distro kwenguva yakareba, kudzamara ndaiisa pane yangu laptop uye KDE yaizomira kushanda kana ndikachinja chimiro kana font (Aller).
kuvhuraSUSE pane desktop uye Arch pane iyo laptop, izvo kusvika zvino zvakanaka (anowanzovenga Linux, asi kubvira izvozvi haatombodi Windows ...)
Virgil Kesari akadaro
Ini ndinofungidzira iwe unogona kuwedzera iyo libdvdcss Repo futi.
Ndakagadzira kare kare asi chirongwa ichi chaive chakasvibira uye hachina kufamba mushe, imwe yenzvimbo dzakapinza mukumisikidzwa kwacho ndeyekuti YaST haina kushanda, YaST inoshanda pasina matambudziko here?
Pindura kuna Virgil Kesari
Mhoro Yast inoshanda pasina dambudziko uye zvese zvese zvanaka ... Kana iri libdvdcss repo handizive kana ichiwanikwa kuFekitori sezvo ini ndisingashandise… ndinomhanya zvese neVLC.
Makandiyedza neichi posvo pandaive ndichiverenga kubasa kwangu. Zvikuru zvekuti izvozvi izvozvi ndiri kukunyorera iwe kubva kuBookbook rangu rakavhurwaSUSE ichangoiswa. Ini ndaida chaizvo kutarisira kwake mune aesthetics. Ndichiri kudzidza kubva kwaari kubvira pandakabva kuLinux Mint. Asi pakupedzisira, hapana chinogoneka pasi rino seinodiwa seLinux.
Ndatenda nekukurudzira kuyedza uku kushandisa izvo "zvisingazivikanwe" (zvirinani kwandiri).
Unogamuchirwa shamwari uye ndinovimba unonakidzwa neSUSE yako: D zvakanyanya.
Ini ndinozviti ndiri fan weArch uye zvigadzirwa zvayo, asi ini ndagara ndakatarisa kuvhuraSUSE kubva kune rimwe divi neimwe shanje. Ndinoda kuzviedza asi ndakanyatsogadzikana muAntergos zvekuti handizive xDD.
Ndiri kuenda kurodha pasi iyo fekitori vhezheni, ini ndinoda kuti iyo distro yandinoshandisa inogadziridzwa mazuva ese 🙂
Rupit Zuva akadaro
Asi Peter, wanga usiri kushandisa Slackware nguva pfupi yadarika?
Ndokusaka ndakachengeta Slackware pane angu ese michina uye maseva uye ini ndinoronga kugara pano. Pakati pemwedzi iyi ndanga ndichiyedza iyi distro zvakanyanya, zvakadzama kuziva kana danho iri rakarurama. Uye mhinduro ndihungu .. Amai hongu. Iyi distro yakandikunda, ikandibata chose uye pasina kupokana ndicho chinhu chakanakisa chandakaedza. Handina mamwe mazwi.
Pindura Rupit Zuva
Hongu ndinozvibvuma ... Handisi kuti Slackware yakaipa. Chinondinetsa inguva iyo iwe yaunofanira kuzvipira kuti uchengete uye chaizvo handina ini ... SUSE akaberekwa kubva kuSlackware saka ndinogara mubazi asi nechimwe chinhu chakanyatsogadzikana:
Ndine mubvunzo wekuona kana paine munhu anogona kundibatsira. Ini ndakaisa iyo fekitori vhezheni ingangoita maviri mavhiki kana zvakadaro kubva kune iso uye ndakaita yakachena kuisa. Dambudziko rangu nderekuti iyo plymouth haishande uye haina kuratidza.
Systemctl chimiro plymouth-start.service raira kuburitsa
Yakatakurwa: masked (/ dev / null)
Inoshanda: yakundikana (Mhedzisiro: chiratidzo) kubvira Sun 2014-10-19 20:52:03 CEST; 1min 31s apfuura
Main PID: 292 (kodhi = yakaurayiwa, chiratidzo = SEGV)
Yambiro: Yuniti faira rakachinja pane diski, 'systemctl daemon-reload' yakakurudzirwa.
Izvo hazviratidzwe pakutanga kana kudzima. Ndatenda.
Kwemazuva mashoma isu takaita kuti pave nemubvunzo mutsva uye mhinduro basa inonzi Bvunza KubvaLinux. Isu tinokurudzira kuti uendese urwu rudzi rwekubvunza ipapo kuitira kuti nharaunda yese ikwanise kukubatsira padambudziko rako.
Iwe unogona kundiudza maitiro ekupinda muKubvunza kana iyo desdelinux foramu, pasina kuumba email account zvakare? Izvo hazvizive password yangu kana zita rangu rekushandisa uye ini ndakanyoreswa kubva Kubvumbi 2012.
Vhura iyo terminal semudzi uye unomhanya:
systemctl inogonesa plymouth-start.service
systemctl kutanga plymouth-kutanga.service
plymouth-set-default-theme yakavhurwaSUSE -vaka-initrd
Nezvo zvinofanirwa kuenda :).
mumurairo "plymouth-set-default-theme openSUSE -rebuild-initrd"
kwazvinoti - kuvaka-initrd zvinyorwa zviviri zvaizoita seizvi
Saka kana zvese zvangoiswa ne zypper, iyo system manejimendi inoitwa kuburikidza neyast, handiti?
Mune mamwe mazwi, zvinyorwa zviri kare "fekitori", ini ndiri mutsva kune ino distro uye handizive kuti RR iri kufamba sei.
Chokwadi ... Kana yaiswa, iwe unogona kuita zvese kubva kuYast yako. Usazvidya moyo nekutevera muperekedzi wangu unenge wagadzirira.
Yakakwana yatove kuiswa, iine imwe kukanganisa pane imwe asi iri kuenderera mberi, ndatenda petercheco tuto 😉
Zvakanaka handina matambudziko .. Nguva nenguva kumhanya mune inouraya:
Ini ndinokuudza nekuti iri kutenderera uye iwe unofanirwa kugadzirisa ... Kana iwe usiri kuda kugadzirisa zvakanyanya shandisa iyo kuburitsa. Nhasi unogona kurodha vhezheni 13.1 inova LTS yekutenda kune Evergreen kana kumirira mazuva gumi nemana gumi neshanduro nyowani 14: D. Kugadzirira kweiyo distro kungave kwakafanana, asi siya iyo GNOME, KDE uye Pacman repos kubva pane ino posvo uye shandisa izvo zvinoenderana neshanduro yacho ... Unogona kuzviona apa:
Ndakaiyedza uye zvakatora chinguva kuti zvigadziriswe (ini ndanga ndisina kuverenga bhuku iri). Nekudaro Laptop yangu inopisa zvakanyanya, pane chirongwa muOpensuse chinondibatsira kudzora t °?
Isa iyo laptop-mode-maturu package uye gadziriso yakagadziriswa :).
ndakagadzirisa kuFekitori. Iye zvino ndinoedza kutanga Apper, ona zvinyorwa, kana kugadzirisa, kana chero chimwe chinhu kubva yast uye hachivhure chero cheicho. izvozvo zvakaitika kune ani zvake?
Wakaisa iyo KDE repo yeFekitori? Wakatangazve system here? Ini ndinokuudza nekuti inoenda pasina matambudziko ...
Inoshanda zvakakwana kwandiri ndichitevera iyi OpenSUSE 13.2 gwara ne kde. Kungokanganisa kudiki nevatyairi veNvidia, izvo zvisati zvagadziriswa kune nyowani 3.16.6-2-desktop kernel, sezvo izvo zvitsva zviri zvishoma varombo.
Ndiri kufara kuti inoshanda kwauri, asi kuvhuraSUSE 13.2 Ini ndinokurudzira iwe shandisa yangu gwara yakatsaurwa kune ichi kugovera sezvo iyo packman repositori inoshanduka ... Unogona kuwana gwara mune yangu Taringa posvo.
Ini ndichaisawo pano ...
Thanks pertercheco. Ini ndinonyatsocherechedza chako chinongedzo.
Francisco Suarez akadaro
Kumwe kusahadzika, ini ndiri paArchLinux, uye iyi vhezheni yeOpenSUSE inondiedza, asi handizive kana paizove nevanotyairi veATI (AKA Catalyst) yebazi iri, sezvo ini ndichishandisa akasununguka, iko kushandiswa kwesimba pamwe netembiricha iri muLaptop yangu ine APU A6 Shanduro 3xxx, ini ndinodawo Lampp yekusimudzira uye Android-sdk, izvi zvese zvinoshanda here?
Ndine urombo nemibvunzo iyi, asi handina nguva yakakwana yekuyedza nhunzi. Mufaro!
Pindura kuna Francisco Suarez
Isa openuse 13.2 asi ini ndine matambudziko ekugadzirisa, haina kuziva repo oss isiri-oss inondipa kukanganisa haigone kubatana kune server. Chinhu chakashamisa ndechekuti ndinokwanisa kufamba pasina dambudziko, ndakatarisa san google uye hapana kwayakagadziriswa, kunyangwe kuchenesa cache.
Ndiwo iwo madiki madiki euseuseuse.
Hora /etc/sysctl.conf uye wedzera kana shandura hunhu kuti chikamu chinongedzera ipv6 chioneke seichi
Wobva watangazve uye wobva watangisa uyu wekuraira
Kutsvaga application yekugadzira ma comics muGNU / Linux
Aptoide: Chitoro chePirate? ... Zviri nani zvinyorwa?